Muxuu ka yiri Sergio Busquets kulanka ay habeen dambe wajahayaan kooxda Napoli? – Gool FM
Dajiye August 7, 2020
(Barcelona) 07 Agoosto 2020. Laacibka qadka dhexe kooxda Barcelona ee Sergio Busquets ayaa xaqiijiyay in kooxdiisa ay si weyn uga faa’ideysatay tan iyo markii uu dhamaaday horyaalka La Liga, si ay ugu diyaar garoobaan kulanka adag ee Napoli, iyo inta kaga harsan olalaheeda tartanka Champions League.
Kooxda Barcelona oo maanka ku haysa in lugtii hore ay soo gashay barbardhac 1-1 ah ayaa habeen dambe ku soo dhoweynaysa naadiga reer Talyaani ee Napoli garoonka Camp Nou, si ay u wada ciyaaraan kulanka lugta labaad ee wareegga 16-ka Champions League.
Inkastoo Sergio Busquets uu ku maqnaan doono sababa la xiriira ganaax kulanka habeen dambe ka dhici doono garoonka Cump Nou, si la mid ah Arturo Vidal, ayaa haddana loo doortay inuu ka hadlo shirka jaraa’id ee kahor ciyaarta.
Haddaba Laacibka qadka dhexe kooxda Barcelona oo ka hadlay dhowr arrimood ee quseeya kooxdiisa ayaa waxyaabihii uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa:
“Waxaan dareemaynaa inaan qanacsanahay, waxaana dooneynaa inaan soo bandhigno wax walbo oo aan heysano, oo aan dhalino goolal, isla markaana aan hoggaanka qabano”.
“Haddii aan sidaas sameyno si fiican ayey wax walba noogu socon doonaan” ayuu yiri Laacibka qadka dhexe kooxda Barcelona ee Sergio Busquets.